बेलायतमा नारी दिवस सम्पन्न – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार ०२:४४ English
बेलायतमा नारी दिवस सम्पन्न
धर्मराज अधिकारी, लण्डन – गैर आवासीय नेपाली संघ एन आर एन युकेले ‘कनेक्टिङ गल्स्र इन्स्पायरीङ फ्युचर’ भन्ने नाराका साथ १०२ औ महिला दिवस भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ। मदर्स डे का दिन आईतबार प्लस्टिडस्थित सेण्ट प्याट्रिक हलमा सम्पन्न महिला दिवस कार्यक्रममा करिब दुईसय भन्दा बढी सहभागि भएका थिए। एन आर एन युकेकी सदस्य एवं महिला विभाग प्रमुख संगिता मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा भएको सो कार्यक्रममा नेपाली दुतावास लण्डनकी उप नियोग प्रमुख अम्बिका मानन्धर लुईटेल, एन आर एन युकेका अध्यक्ष कुल आचार्य, युरोप कोअर्डिनेटर लक्ष्य गुरुङ, पुर्व अध्यक्ष सुर्य गुरुङ, समाजसेवी डा. राघव धिताल, श्रीमती डा. जनक धिताल, समाजसेवी नन्द कुमारी गुरुङ, देवी आले, एन आर एन युकेका पदाधिकारीहरु, सल्लाहकारहरु लगायत व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
एन आर एन युकेका अध्यक्ष कुल आचार्यको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै उपनियोग प्रमुख लुईटेलले नेपाली महिलाहरु सामाजिक आर्थिक एवं मानसिक रुपमा पछाडी परेको बताइन। नेपालका दुर्गम भेगमा रहेका महिलाहरुको अवस्था दयनीय रहेको स्पष्ट पार्दै उनले महिलामाथि पुरुषहरुको थिचोमिचो विकराल रहेको समेत जानकारी दिइन। कार्यक्रम संयोजक संगिता मरहठ्ठाले एन आर एनको इतिहासमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको नारी दिवस अत्यान्त सफल भएकोमा प्रशन्नता व्यक्त गरीन। उनले नेपालका दुर्गम भेगमा रहेका नारीहरुको हितमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले कार्यक्रम गरिएको बताउदै सहयोगीहरुप्रति आभार प्रकट गरेकी थिइन। एन आर एन युकेको सदस्यको नाताले आफु एन आर एनको हरेक गतिविधिमा महिला आवाज बुलन्द पार्न लागि पर्ने उनको बाचा थियो।
सो अवसरमा एन आर एन युरोप कोअर्डिनेटर लक्ष्य गुरुङ समाजसेवीहरु डा. जनक धिताल, नेपलिज नर्सिङ एशोसियसनकी अध्यक्ष शान्ता संग्रौला, नन्द कुमारी गुरुङ, देवी आले लगायतले महिलाहरु आधा आकाश भएको चर्चा गर्दै महिलामाथिका सम्पुर्ण विभेद अन्त्य गरी समुन्नत समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपालमा महिलाहरुमाथि हुने विभेद कल्पना समेत गर्न नसकिने भएको बताउदै उनीहरुले महिला सशक्तिकरण र उचित शिक्षाका लागि प्रवासमा रहेका महिलाहरुले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा अध्यक्ष कुल आचार्यले महिलाहरुलाई जागरुक बनाउन एन आर एनले महिला दिवस मनाउने निर्णय गरेको बताए। उनले बेलायतमा रहेका महिलाहरुलाई अझ सशक्त बनाउन एन आर एनले विशेष पहल गर्ने समेत जानकारी दिए। सो अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरीएको थियो। सांस्कृतिक कार्यक्रममा सितु खरेल, सिता पौडेल, ज्ञानेन्द्र गुरुङ, याम गुरुङ, निर्मला गुरुङ लगायतले विभिन्न गीत गाए। त्यस्तै हमा श्रेष्ठले कविता वाचन गरेकी थिइन। सावित्री थापा, गंगा थापा, भवानी थापा र लुकु थापाले नेपाल र बेलायतका नेपाली माझ चर्चा पाएको कौडा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा संचालीका उषा भट्टको तिखो जोक संगै स्थानीय कलाकारहरुले रोचक नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए।
एन आर एन युकेका कोअर्डिनेटर रामशरण सिंखडा र संचारकर्मी उषा भट्टले संचालन गरेको कार्यक्रमको सह संयोजन सुष्मा लिम्बुले गरेकी थिइन। सहभागिहरुले नेपाली खानासंगै डि जे तथा डान्समा रमाइलो गरी महिला दिवस मनाए।
७ चैत्र २०६८, मंगलवार १९:११ मा प्रकाशित